လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲတွေကို ကျနော်တို့အားလုံးလိုလို သွားဖူးကြပါတယ်၊ တချို့ကလည်း ဒီလိုပွဲမျိုးတွေက ပကာသနတွေများလို့, ဟန်ဆောင်မှုတွေများလို့ ရှောင်လေ့ရှိ်တယ်ဆိုရင် တောင်မှ အနည်းဆုံးတော့ မျက်နှာနာမှာစိုးလို့၊ လူမှုရေးအရ ဘယ်လိုမှ မကောင်း တတ်လို့ စသဖြင့် မသွားမဖြစ် သွားရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက မတူညီကြတဲ့လူသားနှစ်ဦး လောကရဲ့ လမ်းအသွယ်သွယ်ကို တူညီတဲ့စိတ်အခြေခံနဲ့ အတူလျှောက်မယ့်အကြောင်း ကြေညာ တဲ့ ဒီပွဲမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းကြဖူးပါတယ်၊
မင်္ဂလာပွဲတွေဟာ တဦးချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်မှု စတာတွေပေါ် မူတည်လို့ တရားသူ ကြီးရှေ့မှောက် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အကျဉ်းရုံးပွဲ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကျွေးပွဲ၊ ဘုရားကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ပွဲ၊ ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ ဧည့်ခံတဲ့ပွဲ စသည်အားဖြင့် ကွဲပြားပါတယ်၊ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး တွေကလည်း ရှေ့သွားနောက်လိုက် အင်မတန်လိုက်ဖက် တာတွေရှိသလို အပုနဲ့ အရှည်၊ အပိန်နဲ့အဝ၊ အဖြူနဲ့အမဲ အပြင်ပန်းအားဖြင့် သိပ်မလိုက်ဖက်တာတွေ လည်းရှိပါတယ်၊ ဒီလိုလက်ထပ်ပွဲတွေ အများကြီးထဲမှာမှ အခု ကျနော်ပြောပြချင်တဲ့ ဒီလက်ထပ်ပွဲလေးကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးဆန်းပါတယ်၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်က ခွေးတစ်ကောင် ကို လက်ထပ်တဲ့ပွဲ ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ၊
တကယ်ပါ၊ လူသားစင်စစ် တစ်ယောက်က ခွေးတစ်ကောင်ကို တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့တာပါ၊ ကြားရ သူတိုင်းက တအံ့တသြနဲ့ စိတ်ဝင်စားကြလို့ပေါ့၊ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ဒီလက်ထပ်ပွဲ ရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းလေးပါ၊ သူကဘာဖြစ်လို့ ခွေးကိုမှ လက်ထပ်ရတာလဲ? ဘာလဲ...သူ့ကို ကြိုက် မယ့်အမျိုးသမီး မရှိလို့လား? မဟုတ်ပါဘူး၊ ဇတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ၊
ဆဲလ်ဗာကူးမားဟာ အသက် (၃၄) နှစ်အရွယ်ရှိ ဟိန္ဒူအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တမီလ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ နာဒုဆိုတဲ့ ရွာကလေးမှာနေထိုင်ပါတယ်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေး တဲ့ဒီဟိန္ဒူလူငယ်လေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) နှစ်က သူ့လယ်ထဲမှာ ခွေးနှစ်ကောင်ကို သတ်လိုက်ပါ သတဲ့၊ အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူကအဲဒီခွေးနှစ်ကောင်ကို သစ်ပင်တစ် ပင်မှာ ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆွဲပြီး ထားခဲ့ပါတယ်၊ ဒီအဖြစ်အပျက် ပြီးတော့ ဆဲလ်ဗာကူးမားက နေ့တဓူဝ အလုပ်တွေဆက်လုပ်ရင်း အေးအေးဆေးဆေးပေါ့၊ ဒါပေမယ့် သူထင်သလောက်တော့ မအေးဆေး ခဲ့ပါဘူး၊
ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာ သူ့အနေနဲ့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် စကားပြောရာမှာ ခက်ခဲလာပြီးတော့ စကားထစ်လာပါ တယ်၊ နောက်တော့ လုံးလုံး ဆွံအသွားရော၊ သ်ိပ်မကြာခင် အကြားအာရုံ လည်းချို့တဲ့လာပြီးတော့ နားမကြားတော့ပါဘူး၊ ပိုဆိုးတာက လေဖြတ်သလိုဖြစ်လာပြီး လမ်းပါ လျှောက်လို့ မရတော့ တာပါပဲ၊ သန်သန်မာမာ လယ်သမားလူငယ်ဟာ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဒုက္ခိတလုံးလုံး ဖြစ်သွား ပါတော့တယ်၊
ဆရာဝန်တွေနဲ့ သူပြကြည့်ပါတယ်၊ ရိုးရိုးကုရော အထူးကုရော ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ဆရာဝန်မှန် သမျှနဲ့ ပြတယ်၊ ဆရာဝန်တွေသာ စုံသွားတယ်၊ ထူးဆန်းတဲ့ ဒီရောဂါကို ဘယ်သူမှ မကုနိုင်ကြဘူး၊ မကုနိုင်ရုံမက ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာတောင် ရှင်းမပြနိုင်ကြဘူး၊ ဆဲလ်ဗာကူးမားလည်း ငွေ ကုန်လူပန်းပေါ့၊ အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်တွေကျပြီး ကယ်ရာကူရာမဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကယ်တင်ရှင် ပေါ်လာ ပါတယ်၊ ဗေဒင်ဆရာ တစ်ယောက်ပါ၊
ဗေဒင်ဆရာကတော့ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းပြရုံတင်မကဘူး၊ ဘယ်လို ကုရမယ်ဆိုတာ ပါ တန်းပြောပါတယ်၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပါပဲ၊ သူ့အပြောအရ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) နှစ်က ဆဲလ်ဗာကူးမား သတ်ခဲ့တဲ့ ခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့ ဝိညာဉ်တွေဟာ သူ့ကိုပြုစား ထားသတဲ့၊ ဒါ့ကြောင့် သူဒါတွေ ဖြစ်နေ တာတဲ့၊ အဲဒီခွေးသရဲနှစ်ကောင်ရဲ့ ကျိန်စာကိုဖျက်ဖို့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းက ခွေး တစ် ကောင်နဲ့သူလက်ထပ်ရမယ်တဲ့၊ ဆဲလ်ဗာကူးမားကတော့ အားကိုးပါရစေဆရာရယ်ပေါ့၊ ဗေဒင်ဆရာ ရဲ့မျက်နှာကလည်း ခပ်တင်းတင်း၊ တပြားမှ မလျှော့နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်တခုပြောချင်တာက လူ့ရဲ့ အားကိုးရှာစိတ်ပါ၊ ကျောက်ခေတ်ကာလ ကတည်းက ဒီစိတ်ဟာ လူသားတွေဆီမှာ ရှိပါတယ်၊ နေနတ်သားကိုးကွယ်မှု၊ မီးနတ်သားကိုးကွယ်မှု စသဖြင့် အားကြီးတဲ့အရာလို့ ထင်တဲ့အခါမျိုး၊ ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှု ရှုထောင့်ကနေရှင်းမပြ တတ်တဲ့အခါ မျိုးတွေမှာ ဒီစိတ်ဟာ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်၊ ဒီအခါမှာ ဗေဒင်လက္ခဏာ မှစ၍ သဘာဝလွန်၊ စိတ်နယ်လွန်နယ်ပယ် တွေထဲမှာ ကျွမ်းဝင်သူတွေကို အားကိုးမိတတ်ကြပါတယ်၊ လူ့ရဲ့ သဘာဝ ကိုက မြင်နိုင်တဲ့အရာထက် မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ မမြင်နိုင်တဲ့အရာ ဆိုတာမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတာရော, ကြိုပြီး မသိမမြင်နိုင်တဲ့ အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာရော နှစ်ခုလုံး ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ် ခြင်းဟာ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်လယ် သမားတစ်ယောက်ဆီမှာ ရှိနိုင်သလိုမျိုး တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် လို့ဆိုတဲ့ လူတချို့ဆီမှာလည်း ဒီလို အားကိုးရှာစိတ်တွေ ရှိနေတာ ကျနော်တို့အားလုံး အသိပါပဲ၊
ဒါနဲ့ ဆက်ပြောရရင် ဆဲလ်ဗာကူးမားလည်း လက်ထပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပါတယ်၊ သူ့အနေနဲ့ လက်ထပ်ရမယ် ဆိုလည်း ထပ်ရုံပေါ့၊ ဒါက အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တွေ့ကရာ ခွေးနဲ့တော့ သူလက်မထပ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် သူနှစ် သက်နိုင်မယ့် ခွေးပျိုမလေးကို ရှာရပါတယ်၊ ခွေးကို မွေးဖို့မဟုတ်ဘဲ လက်ထပ်ဖို့ရှာတဲ့ အခါမှာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူပါဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာ တော့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ အသက် (၄) နှစ်အရွယ် သတို့သမီးလောင်းကို ရှာတွေ့သွားပါတော့တယ်၊ အဲဒီတစ်ကောင်ကြွက် သတို့သမီးလောင်းကို သူတို့ ‘ဆဲလ်ဗီ’ လို့နာမည် ပေးလိုက်ကြပါတယ်၊
ဒီလိုနဲ့ တိမ်ပြာတဲ့ တနင်္ဂနွေတနေ့မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အသီးသီးကို ထိုးခွဲလို့ မင်္ဂလာပွဲလေးဟာ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်၊ ဒီပွဲမှာ ဆဲလ်ဗာကူးမားတစ်ယောက်တော့ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်နေလိမ့် မယ်လို့ ကျနော် တွေးကြည့်မိပါတယ်၊ သတို့သမီးက သူ့ကို ကြင်ကြင်နာနာမှ ဆက်ဆံပါ့မလား? တော်ကြာ လူပုံအလယ်မှာ စိတ်နောက်ပြီးကိုက်လိုက်မှ ဒုက္ခလို့ သူတွေးကောင်း တွေးနေနိုင်ပါ တယ်၊ ခွေးပျိုမလေးကို ဟိန္ဒူထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဆာရီတထည် ခြုံပေးပါတယ်၊ ပြီးတော့ ပန်းကုံး တကုံးစွပ်ပါတယ်၊ သတို့သမီးရဲ့ ဆင်ယင်မှုကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ၊ တတ်နိုင်တဲ့ တချို့မင်္ဂလာ ဆောင်တွေမှာလို စိန်ဆံထိုးတွေ၊ စိန်နားကပ်တွေ၊ စိန်ဘယက်တွေ၊ စိန်လက်စွပ်တွေနဲ့ တဖိတ်ဖိတ် တောက်နေတဲ့ စိန်စီသော သတို့သမီး မဟုတ်ပါဘူး၊
အချိန်ကျတော့ ‘ဇနီးမောင်နှံလောင်း’ ကိုဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကို ခေါ်သွားကြပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ဘုရား ကျောင်းရဲ့ အကြီးအကဲက သူတို့ကို လက်ထပ်ပေးလိုက် ပါတော့တယ်၊ လက်ထပ်ပွဲမှာ ဆဲလ်ဗာ ကူးမားရဲ့ သူငယ်ချင်းက အမှတ်တရစကား ပြောတဲ့အခါ သူ့သူငယ်ချင်းဟာ ကျိန်စာကိုချေဖျက်ဖို့ အတွက်သာ ဒီခွေးကိုလက်ထပ်ရကြောင်းနဲ့ အခြေအနေတွေ အားလုံးပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ တကယ့်သတို့သမီး တစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းဖက်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ် လို့အားလုံးကို ရှင်းပြသွား ပါတယ်၊ လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ ဘာဆက်ဖြစ်သေးလဲ? ဆဲလ်ဗာကူးမားရဲ့ ကျိန်စာကော ပြယ်သွား လား? နောက်ပိုင်း ဇတ်လမ်းကိုတော့ ကျနော်တို့ ဆက်မသိရပါဘူး၊
ဒီဇတ်လမ်းမှာ ဆဲလ်ဗာကူးမား ဆိုတဲ့လယ်သမား လူငယ်လေးကို ကျနော်တို့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ ကနေ ခံစားကြည့်လို့ ရပါတယ်၊ ခွေးတစ်ကောင်ကို လက်ထပ်သူဆိုပြီး ကျနော်တို့ ရယ်မောပစ် လိုက်လို့ ရပါတယ်၊ အဲဒီလို ဝိုင်းရယ်ကြမယ့် လူတွေလည်း နည်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော် ခန့်မှန်းကြည့် ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ‘တကယ်ရူးလဲ ရူးတဲ့ကောင်ပါပဲကွာ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် ကလည်းနဲပါဘိ’ လို့ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ ခေါင်းယမ်းနေလို့ လည်းရပါတယ်၊ ‘အယူသည်း လွန်းတဲ့ ကောင်ပဲ’ လို့ မှတ်ချက်ချလို့ ရသလို ‘နဲနဲမှ အရှက်နဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ ကောင်မဟုတ်ဘူး၊ ခွေးကိုများ လက်ထပ်ရ တယ်လို့’ ဆိုပြီး မညှာမတာ အပြစ်တင်လို့လည်း ရပါတယ်၊ ဒါကတော့ တဦးချင်းစီရဲ့ ရှုထောင့် ရွေး ချယ်မှုနဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ စိတ်အခြေခံပေါ်မှာ ပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်၊
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒီခွေးနှစ်ကောင်ကို သတ်မှုဆိုတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ နေ့ကနေ (၁၅) နှစ်လုံးလုံး သူဘယ် လောက်စိတ်ဆင်းရဲ နေခဲ့ရမလဲ? အမည်တပ်လို့ မရတဲ့ ရောဂါတွေကလည်း တခုပြီးတခု၊ ငွေတွေ လည်းကုန်၊ အားကိုးရမယ့်သူ ကလည်းမရှိနဲ့၊ သူတကယ်ကို ပင်ပန်းတကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရမှာပါ၊ နောက်ဆုံး ကုသနည်းကို တွေ့ပြန်တော့လည်း လုပ်ရမှာက အငိုလွယ် သလောက် အရှိုက်ခက်တဲ့ ကိစ္စ၊ ပြီးတော့ တကယ် ပျောက် မပျောက်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူက အာမခံမှာလဲ? အားလုံးက ဝိုင်းဟား လိုက်ကြမယ့်ဖြစ်ခြင်း၊ လူကြီးလူငယ်မရွေး သွားလေရာမှာ ဝိုင်းစ, မှာကတော့ အသေအချာပါပဲ၊ ဒီကိစ္စတွေပြီးပြန်တော့ သူ့ကိုလက်ထပ်ရဲမယ့် အမျိုးသမီး ကော ရှိပါဦးမလား? ဒါတွေကို တွေးကြည့် လိုက်တော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူလွယ်လွယ်နဲ့ ချခဲ့မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲလ်ဗာကူးမားကတော့ ဒါဟာ သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်ရဲ့ အဖိုးအခကို ပြန်ပေးဆပ်ရ ခြင်းပဲလို့ ခံယူပြီး အားလုံးရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလောကမှာ ခွေးနှစ်ကောင် ကိုသတ်မှု ဆိုတာထက် အများကြီး ပိုကြီးလေးတဲ့ လူသတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေကြသူတွေ ရှိပါတယ်၊ တကယ့်ကို ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ တန်ဖိုးရှိလူသားတွေပါ၊ ဒီလူသား တွေကို လူမဆန်စွာ သတ်ခဲ့ကြတဲ့ ‘လူတွေ’ ရှိပါတယ်၊ သူတို့တွေကကော..... စိုက်ပျိုးခဲ့တာတွေ အတွက် ပြန်ရိပ်သိမ်းရမယ့် အချိန်ရောက်လာရင် ဆဲလ်ဗာကူးမားလောက် သတ္တိရှိပါ့မလား? ကျနော် သိချင်လှပါတော့တယ်။ ။
၂၂ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by ညီလင်းသစ် au 22.11.07
ခွေးကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ သူသတ်ခဲ့တဲ့ ခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့သွေးတွေ စင်ကြယ်သွားနိုင်မလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ဟစ်တလာက ဂျုးမတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့…….။ သူသတ်ထားတဲ့ ဂျူးတွေရဲ့ သွေးတွေစင်ကြယ်သွားမလား… အဲလိုပေါ့လေ။
အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါရှင်။
ညီလင်းသစ်ရေ.. တကယ်တွေးစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို တွေ့ရတဲ့ ဘလော့လေးပဲ။ အရေးအသားလည်း ညက်တယ်။ ညီလင်းပြောသလို အမလည်း တွေးနေမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တော်ကိုငမလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ တကယလို့ အဖြေဘာရသွားတယ်ဆိုတာအထိ ရောက်အောင် ဖော်ထားရင်တော့ လူ့လောကထဲက ဆန်းတဲ့ သဘာဝတခု ဖြစ်မှာပဲနော်။